Ungayithatha njani iArhente yeTwitterDeck kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 299
Iindidi ezininzi zeeakhawunti zisebenza ngaphakathi kwenethiwekhi. Eyona iphambili yiakhawunti yokonwaba umntu anokuba nayo usuku nosuku, ngaphandle kwenjongo enye ukugcina iindaba okanye amava abahlobo bakhe. Kukho iiakhawunti zabantu abazisebenzisela iinjongo zokuphembelela.
Okokugqibela, uya kufumana iakhawunti zentengiso yedijithali, apho abantu kunye neenkampani bathengisa iimveliso kunye neenkonzo zabo. Kweli qela lokugqibela leeakhawunti, iinkampani zonxibelelwano zentlalo zenze izixhobo ezithile zokulawula olu hlobo lomsebenzi.
Kwi-Twitter, eli nqaku laziwa njenge TweetDeck kunye neqela labantu abalawula ezi akhawunti baziwa ngokuba ziiTweetDeck Teams
Yintoni amaqela e-TweetDeck?
Inqaku le-Twitter le-TweetDeck laqala ukusebenza ngo-2008. Ngale nto unokulawula iakhawunti kunye neqela labantu obathembayo, ngaphandle kokwabelana ngegama eligqithisiweyo leakhawunti.
Le ndlela ilungele iiakhawunti zeshishini apho abantu abaninzi kufuneka babe nokufikelela. Nangona kunjalo, lilungu elinye kuphela elinemvume yokwenza yonke imisebenzi yeakhawunti, kodwa amanye anokusebenza njengenkxaso.
Zeziphi iindima ezinazo iiTweetDeck Teams?
Inkqubo iqwalasele iindidi ezintathu zeendima kula maQela:
Umnini, onokuthi abe ngumyili weakhawunti, ulawula ipaswedi, inombolo yefowuni kunye nolunye ulwazi olufunekayo ukuvula iakhawunti. iakhawunti
Umlawuli umema amanye amalungu kwiQela kwaye wenze iintshukumo ze-Twitter ezinje ngeTwitter, ukuphinda ubhale kwakhona, ukuthumela imiyalezo, ukubhukmaka, ukuthanda, kunye nezinye ezininzi egameni leqela.
Oku kunika iimvume kwabanye amalungu, ke ithatha uxanduva ngezenzo abazenzayo.
Umlawuli, onika imvume yokufikelela kwamanye amalungu, kwaye ubamele kwizenzo ezifanayo ezichazwe apha ngasentla, kodwa abakwazi ukuphatha igama eligqithisiweyo.
Umdibaniselwano, omele iqela kuphela kwizenzo ezifanayo, kodwa awunakho ukunika nayiphi na imvume.
Ndingawenza njani amaQela e-TweetDeck am?
Ukuqalisa, yiya ku-twitterdeck.twitter.com kwaye ungene. Ukuba sele ungene ngemvume kwi-Twitter, awuzukuphinda uyenze kwakhona kwi-interface ye-TweetDeck.
Ngasekhohlo kwesikrini, uya kubona ikholamu enokhetho oluninzi, emazantsi ale kholamu uya kufumana i icon "Iiakhawunti".
Ithebhu iya kubonakala kwangoko, apho uyakufumana khona ulwazi lweakhawunti yakho, kwaye phantsi kwegama lakho uya kubona ukuba unesihloko "Lawula iqela".
Uya kufumana i icon "Qhagamshela enye iakhawunti onayo", ukudibana nezinye iiakhawunti ezizezakho.
Ngokuqhubeka "Lawula iqela" ungongeza amalungu eqela, njengenxalenye yelinye imenyu eya kubonakala ngebhokisi ethi "Yongeza ilungu leqela". Chwetheza igama lomsebenzisi leakhawunti. Qinisekisa ukudibana ngokunqakraza kwi icon emile emile.
Ungaqhubeka "Inyathelo lesiqinisekiso" Phambi kokuba uqale ukusebenzisa iQela le-TweetDeck.
Unokufumana ekupheleni kwekholamu i-icon yolawulo lwe-TweetDeck ngeendlela ezininzi: "Amanqaku okukhululwa", "Iindlela zokudubula zekhibhodi", "Iingcebiso zokukhangela", "Useto" kunye no "Phuma".
1 Yintoni amaqela e-TweetDeck?
2 Zeziphi iindima ezinazo iiTweetDeck Teams?
3 Ndingawenza njani amaQela e-TweetDeck am?